Hal sanno oo lagu darayo ku waajibida iskuulka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hal sanno oo lagu darayo ku waajibida iskuulka
La daabacay torsdag 12 september 2013 kl 12.33
Xukumada ayaa dooneysa in ay hal sanno u kordhiso waajibka iskuulka ardeyda shahaadadooda liidanto oo aan waxbarashada dusiga sare soo gali karin. Wasiirka tacliinta Jan Björklund ayaa iminka baare ka soo baraandega u saarey.
- Kooxda qatar weyn ugu jira shaqo laan oo ay ku adag tahay in ay cag dhigtaan b ulshada , waa kuwa aan gaarin hadefka fasalka sagaalaad. Waa in aan sameynaa wax badan si ay kuwop badan u garaan hadefkas, ayuu yeri wasiirka waxbarashada Jan Björklund.
Maanta waajibka iskuulka ayaa ah laga bilaabo fasalka koobaad ilaa sagaalaad dugsiga hoose dhaxe. Waxbarashada dugsiga sare ayaa ah mid iskeed ah inkastoo ardeyda ay intooda badan maanta dhigtaan dugsiga sare. Xukumda ayaa hada dooneysa in ruux baare ah oo loo saarey soo bndhigo hindishe ku sabsan xilliga xagaaga kuleylaha in waajib looga dhigo aadida iskuulka ardeyda sagaalaadka dhameysey balse aan heysanin shahaadooyin kufilan oo ay ku soo galaan barnaamijyada kalo gedisan ee dugsiga sare. Ardeydas oo dhan boqolkii 12.
Baaraha waxa uu sidoo kale la rabaa in uu soo bandhigo hindise lagu kordhinayo waajibka iskuulka mudo hal sanno ah ardeeyda xagaaga iskuulka aada balse aan ku guuleysan in ay shahaado kufilan helaan.
- Qaar kamid ardeydan qaybo yar oo kamid maadooyinka ayey ku dhaceen. Taas oo ay dhowr asbuuc gudahood ku dhamerstiran karaan iskuulka xilliga xagaaga. Laakiin dacan kuwooda maadooyn badan u dhimanyahiin waxey ka micno tahay in wax ka maqan yahiin tacliintooda mana kufilna iskuulka xagaaga. Waa kuwaas kuwa hal sanno oo dheerad ay muhiim u tahay, ayuu yeri wasiirka waxbarashada.
Dhamaan xisbiga barlamaanka aan ka aheyn xisbiga Vänsterpartiet iyo Kristdmokraterna ayaa ayugan sheegey in ay doonayaan in xilliga iskuul baradka oo ah fasalka ebarka ah ee ilmaha lix sanno jirka ah dhigtaan in waajib laga dhigo taas oo maanta ah mid iskiis ah. Sidoo kale xisbiga Socialdemokratiga ay shir-sannadeedkiisii gu’gii la soo dhaafey ku go’aamiyey in waajib laga dhigo dugsiga sare ee la yiraahdo gymnaisum . laakiin Jan Björklund wasiirk waxbarshada ayaa taa u arka in ay tahay ka dardar aan loo baahneyn.
- Waxey iila muuqataan fikrad qaab daran. Dugsiga hoose/dhexe ayaa ah in uu ahaado waajib hal sanno na lagu daro, si ay qaar badan u gaaraan hadefka dugsiga hoose/dhexe. Balse dugsiga sare in shahaado laga qaato si loo soo galo jamacadaha taas kamo dhigi karno mid waajib ku ah dhamaan. Qorshaha noocaas ah ma ahan mid caqli gal ah, ayuu yeri wasiirka tacliinta Jan Björklund.